Realme zigara 10 nde ekwentị zuru ụwa ọnụ naanị ọnwa 14 | Gam akporosis
Realme bụ otu n’ime ndị nrụpụta ama ama toro n’oge na-adịbeghị anya. O doro anya na mkpebi oppo, nke ga - eme ka ọ bụrụ onwe ya, adịla mma maka ọnụọgụ ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, yana maka mmụba ya na mpaghara ndị ọzọ - gụnyere China y Europe-.
Dị mebiri atụmatụ niile na India, isi ahia ya. N'ebe ahụ ka ndị na-azụ ahịa nabatara ya nke ọma, ọ bụ ya mere o ji nọrọ n'etiti ụlọ ọrụ ekwentị kachasị elu na mba ahụ. N'ihi eziokwu ahụ na ọ gbasaa usoro ya, ọ bụghị naanị ịnye onwe ya ebe ahụ, kamakwa na mba ndị ọzọ kemgbe ọ dịbeghị anya, mbupu ya abawanye ụba, nke mere na, ruo ugbu a, na ndekọ nke ọnwa 14, o jisie ike zipu ngwaọrụ 10. N'ezie, n'oge a na-ebipụta edemede a, ọnụ ọgụgụ a agafeela.
Weibo bụ ụlọ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-ewu ewu nke na-elekọta mmadụ na ntanetị nke ụlọ ọrụ na-ekwukarị ọkwa na teas. Site na nke a, Realme wepụtara ozi ọma ahụ.
Emezuru ihe ngosi a n'etiti Mee 16, 2019, mgbe ebido Realme 1, na taa. Na mkpokọta okwu, ụlọ ọrụ ahụ rere ihe dị ka puku ekwentị iri abụọ na abụọ kwa ụbọchị, ma o doro anya na ọ naghị arụ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị adị na-emetụta ụbọchị na oge kwa afọ.
Ọ chọrọ n'ezie ịnọgide na-eto eto, ọ na-eme ya ma ọ ga-aga n'ihu na ya. Ebumnuche ya ịzụ ahịa na China, dị ka ule, emezuola, yana mgbasawanye ya na Europe dum. Ebe ọ na-erubeghị ugbu a bụ na South America na North America, mana n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ozi banyere mgbasa ga-ekwe omume ịgbasa n'ofe nnukwu kọntinent ahụ. Enwere ike n'ime ọnwa ole na ole ma ọ bụ afọ ole na ole, anyị ga-ahụ Realme ka ọ nọrọ n'ihu ụwa niile, dị ka Huawei, Xiaomi ma ọ bụ Samsung.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme zigara 10 nde ekwentị zuru ụwa ọnụ naanị ọnwa 14
Fosil Gen 5: Elekere ohuru na Wear OS
Mkpụrụedemede gafere Apple wee bụrụ ụlọ ọrụ nwere ego kachasị n'ụwa